13 Mashruuc Oo Imaaraadku Ka Fulinayeen Somaliland Oo Dhammaantood Faashil Ku Dambeeyey - Jigjiga Online
HomeSomalida13 Mashruuc Oo Imaaraadku Ka Fulinayeen Somaliland Oo Dhammaantood Faashil Ku Dambeeyey
13 Mashruuc Oo Imaaraadku Ka Fulinayeen Somaliland Oo Dhammaantood Faashil Ku Dambeeyey
11/06/2020 Mohamed Mohamoud
London, June 11, 2020- (JO)- Qoraa Cabdiraxmaan Fidhinle oo ah Aqoonyahan reer Somaliland ah inta bandanna ka hadla am aka faallooda Arrimaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka ayaa sheegay in baadhis iyo daba-gal muddo dheer socday oo uu ku sameeyey Mashaariicdii horumarineed ee Imaaraadku ka waday Somaliland ee ay xukuumaddii hore keentay dhammaantood faashil noqdeen oo aanay waxba ka hir galin isaga oo xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ugu baaqay in ay degdeg baadhis culus ugu samayso Mashaariicdaasi oo uu ku sheegay 13 Mashruuc.
Qoraal uu arrintan kaga hadlayo oo Cabdiraxmaan Fidhinle soo gaadhsiiyay wargeyska Madaxa bannaan ee Foore ayaa u dhignaa sidan: “Baadhis iyo dabo gal mudo dheer qaatay ka dib, Waxaa loo sibir saaray in Mashaariicdan hoose ee dawlada imaaraatigu (UAE) maalgeliyeen ay ku wada fashilmeen gacantii dawladdii Siilaanyo taas oo uu abaanduule ka ahaa Xafiiska dawlada Somaliland ku laheyd dalka Imaaraatiga waqtigii dawlada Siilaanyo. Qaar ka mid ah Mashaariicdan waxaa ilaa hadda dul hoganaya mad-madow faro badan, Musuq- Maasuq , iyo mashruuc ku macaash aan loo meel-dayin.
1- Mashuruucii Baaxada lahaa ee Biyo Xidheenka Weyn ee Xubo weyne ee (Waaheen) Mashruucan waxa la bilaabay 26/12/2015 Waxaana uu dhamaan lahaa 25/08/2016- Mashruucan oo fashilmay, fashilaadiisa waxaa iska baraxday dawlada Muuse Biixi waxaana fadeexaddaa loo sibir saaray Dawaladii Siilaanyo iyo Wasiiradeedii.
2- Mashruucii Biyo gelinta Xunbo weyne ( Pipeline ) Mashruucani wuxuu ku fashilmay gacantii Dawladii Siilaanyo iyo dawlada UAE oo usoo wakiilatay hayada Khalifa Foundation.
3- Mashaariic horumarineed oo yar yar oo iyana isugu jira Xarumo Caafimaad (MCH), Dugsiyo Waxbarasho iyo Suuqyo la socda ayaa lagu heshiiyey in la dhagax dhigo 1/3/2016 si ay mashaariicdaasi u dhamaadaan 28/02/2017. Mashaariicdaasi waxaa loo qoondeeyey in ay ka fulaan magaalooyinka Borama, Hargeisa, Burco iyo Berbera lakiin waxay ku ragaadeen gacantii markaa maamuleysay ee Xukuumadii Siilaanyo.
4- Mashruuca dhismeyaasha Hospitaalada laga bineeyey magaalooyinka Berbera, Burco iyo Hargeisa ayaa iyaguna qabyo wada noqday oo aan weli la dhameystirin.
5- Mashruuca Wadadii rajada ee Berbera Corridor ee la dhagax dhigay 28/02/2019 ayaa mudadii uu socotay oo ah 15 bilood lagu dhameeyey 12-Km oo keliya taa soo u muuqata in aanay marna ku dhamaaneyn waqtigii loo mudeeyey in ay wadadaasi ku dhamaato oo ku began May 2021. Waxaa nasiibdaro ah in 6-dii shirkadood ee dhismaha wadada waday lagu soo koobay shirkad keliya oo aan marna ku dhamaystireyn Wadadaas waqtigii loo cayimay.
6- Mashruuc Waxbarasho oo Scholarship ah oo ay ku balan qaaday in ay bixinayso dawlada imaaratigu UAE ayaan isna fulin. mashruucan oo ay aheyd in 45 arday ee ugu horeeya in ay dawlada imaaraatiga UAE waxbarasho u tagaan, taa soo lasyku raacay in uu bilaabmo taariikhda 20/01/2016. Qaadista Ardeydan waxaana ku fashilantay Hayda Khalifa Foundation iyo Xukumadii Siilaanyo ee markaa talada haysay qaar ahaan Wakiilkii Xafiiska Somaliland ee UAE Waqtigaas fadhiyey.
7- Mashruuca kor u qaadida aqoonta iimaanada masaajidada Somaliland oo laysku raacay in 22 iimaam loo qaado oo lagu tababaro dalka UAE 17/01/2016
8- Mashruuca Tayenta aqooneed ee Wariyeyaasha idaacada Quraanka kariimka ka shaqeeya , Qalabeynta iyo dhismaha Idaacada Quraanka Kariimka oo lagu heshiiyey in mashruucan lagu dhameystiro 20/01/2016, Nasiib daro Labadan mashruuc midina ma fulin.
9- Mashruuca Dayactirka Wasaaradda Awqaafta oo lagu heshiiyey in 19/06/2016 lagu dhameystiro mashruucaasi isna uma fulin sidii loogu heshiiyey.
10- Mashruuca Wersheda Hilibka ee Berbera oo loo qoondeeyey in la dhameystiro 7/06/2016 –Mashruucan weli umuu dhamaan sidii loogu talo galay.
11- Mashruuca Berbera Free Zone ee ay bilaabi lahaayeen imaaraatigu dhamaadkii sanadkii hore 10/12/2019 isna weli wuu rafanayaa .
12- Mashruucii horumarinta tamarta oo ku kacaayey lacag dhan $7 million doolar kaas oo ay ka fulin lahaayeen magaalada Berbera isna waxba kama soo naaso cada.
13- Mashruucii Saldhiga fadhiisinka ciidamada ee Madaarka Berbera oo isga aan weli dhinacna loo dhaqaajin. Yaab !!
Dhamaan mashaariicdaas kor ku taxani waxay wada noqdeen ” Aan ka fuudee Allow Fii haa ” iyo qaar aan fulin iyo qaar noqday faashil lagu daneystay.
Gebagebo : Waxaa Xukuumada Somaliland loo soo jeedinayaa in ay gudi dabo gal ah u saarto dhamaan mashaariicda ay balan qaadeen dawlada imaaraatigu oo aan badankoodu u fulin sidii loogu talo galay. Mashaariicdan is wada taagtay qaarna noqdeen faashilka waxaa markhaati u ah sida ay u sii kala fogaanayaan xidhiidhka ka dhaxeeya dawalada imaaraatiga UAE iyo Somalilaan.. Waxaan idiinku soo garoocayaa qormadan ” Aniga Daaha kama rogin ee dadkuba wuu arkaayaa – Shacabow tiraa kaa gedmane wax isu gey-geyso” !!
Qalinkii : A/raxmaan Fidhinle
“Haddii Muuse Biixi Adigu Keligaa Aad Keeni Karto Waa Hawl Kale Ee Noo Sheeg, Lakiin Annagu Muuse Xidhiidh Ayaanu Leenahay.” Sheekh Shariif
Xisbiyada Somaliland Oo Ku Kala Aragti Duwanaaday Kulanka Maanta Jabuuti Ku Dhex Maraya Biixi iyo Farmaajo